ToutApp: Trachọ ahịa, ndebiri na nyocha | Martech Zone
Maka nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa, ndị nnọchi anya azụmaahịa nwere ọnọdụ a na-apụghị izere ezere nke inwe mkparịta ụka na ikpo ụzọ mgbe ụfọdụ iji jikọọ olile anya ma ọ bụ abụọ ga-agbanwe. Sistemụ ahịa akpaaka ọhụụ dị ka ndị na-akwado anyị On Interactive jikwaa isi ndu na nurturing nkwukọrịta maka ọha mmadụ, mana ndị ọrụ ahịa ka ga-ewepụta ozi email nke ha 1: 1 iji jikọọ n'onwe ha na ndu ha.
niile bụ a osooso n'elu ikpo okwu na-enyere gị ahịa otu dee ozi ịntanetị ngwa ngwa, soro njikọ na-emechi ndị ọzọ amụọ. Tout na-arụ ọrụ site na ngwaọrụ gị dị ugbu a gụnyere Gmail, Outlook, na Salesforce.
Ndụ nri - Ọbụghị naanị na ị nwere ike soro echiche, pịa yana azịza ya, ịnwere ike ịme ihe ozugbo na Live Feed gị. Na otu pịa, kpọọ oku, gbanyụọ ozi email ma ọ bụ lelee data CRM n'otu ebe.
Email Ndepụta - Nweta ọhụhụ oge na ihe na - eme n’ozi ịntanetị gị. Mara mgbe mmadụ na-ele, pịa ma ọ bụ zaghachi email.
Ndepụta weebụsaịtị - Nweta nghọta n'ime ihe olile anya gị nwere mmasị na ya. Ozugbo atụmanya pịa na njikọ dị na email gị, ị ga-amata oge ọ bụla ha gara na webụsaịtị gị, peeji ọnụahịa ma ọ bụ Enyemaka Center ka nke ahụ gasị.
Ndekọ Mgbakwunye - Na Mgbakwunye Mgbakwunye, ịgaghị ahapụ gị n'ọchịchịrị. Hụ ma atụmanya mepere mgbakwunye gị, yana ibe ndị ha lere.
Jiri Tout N'ime gị Email ahịa - You nwere ike iji Tout site na ngwa ngwa weebụ anyị, ngwa mkpanaka anyị, site na CRM gị ma ọ bụ ọbụlagodi n'ime Ime Email Ndị Ahịa Gmail na Outlook.
Na-ejikọta na Salesforce na CRM ndị ọzọ - Tout jikọtara ozugbo na Salesforce, Highrise, CapsuleCRM na Batchbook, mekọrịta kọntaktị gị ma na-eme ka ọrụ gị dị ọhụrụ.
Tags: nkwukọrịta ahịaemail ahịaNkwado ire ahịaniiletoutapp